Oge Angular: kedu ihe ọ bụ, njirimara na ihe atụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Na physics, a na-amuta ngwa ngwa dị ka angular ọkụ. A na-etinye ego a nke mmegharị angular na ntụgharị ntụgharị, nke na-eme ka ọkụ ahụ bụ maka ntụgharị ntụgharị. Ogologo angular bu otutu onu ogugu nke a na-ejikarị site na ntụgharị nke urughuru na oge ma obu ihe gbatiri gburugburu axis nke gabigara ebe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka angular ọkụ nke uru ọ bara na physics.
1 Gịnị bụ angular ọkụ
2 Ọnụ ọgụgụ nke ngagharị
3 Angular oge nke urughuru usoro
4 Ihe Nlereanya nke angular ọkụ
Gịnị bụ angular ọkụ
Mgbe anyị na-anwa ị gbakọọ ya nke ụfọdụ ihe na-emi odude ije gburugburu axis ọ dị mkpa mgbe nile ka a mata axis nke adiana conveniently. Anyị ga-amalite iji ihe dị iche iche mee ihe, m na-ede ọkụ ọkụ site na ndebiri L. Oge na-adaba adaba bụ p na ọnọdụ nke mkpụrụ ahụ n'ihe gbasara axis nke na-agabiga na otu isi O bụ r.
Nke a bụ otu anyị si mee ya gbakọọ n'ụzọ ndị a: L = rxp
Ihe ntanye ahụ na-esite na ngwaahịa ngwaahịa ahụ dị n'akụkụ ụgbọelu nke ndị ọrụ na-esonye guzobere. Nke a pụtara na nduzi echiche nke enwere ike ịchọta site n'aka aka nri maka ngwaahịa obe. A na-atụle ọkụ ọkụ na nkeji nke n'arọ kwa mita mita / abụọ. A tụrụ nke a dịka usoro ụwa nke nkeji ma enweghị aha pụrụ iche.
Nkọwa a nke ike ọkụ na - eme ka ọ nwee uche kachasị maka ahụ nke mejupụtara ọtụtụ ahụ.
Ọnụ ọgụgụ nke ngagharị
Anyị na-eji angular ọkụ nke a mgbe urughuru iji mara na ọnọdụ nke adiana nke a isi ma ọ bụ a ahu nwere ike si mesoo dị ka ndị dị otú ahụ. Cheta na nke a na - eme mgbe akụkụ nke anụ ahụ na - eleghara anya na trajectory nke mmegharị ya. N'ihe metụtara vector nke angular ọkụ n'ike na-akwanyere a nyere mgbe na linear ọkụ nke a mgbe urughuru na na-akpali dị ka okirikiri bụ angular ọkụ.
Maka ikpe nke urughuru nke na - agagharị, akụkụ ya bụ ogo 90. Nke a bụ n'ihi na oke ọsọ nke angular na-emetụkarị mgbaghari na yabụ na-adabere na okirikiri.
Mgbe anyị na-ekwu maka ume ọkụ anyị na-ekwu maka oge enweghị ọrụ. Nke a bụ ihe ọzọ karịa ihe a kọwara mgbe a isiike ahu nwere inertia nke ya ahu megide adiana gburugburu a ụfọdụ axis. Oge a nke inertia na-adabere ọ bụghị naanị na oke nke ahụ, kamakwa na anya site na ahụ ya na axis nke ntụgharị. Enwere ike ịghọta nke a karie ma ọ bụrụ na anyị chere na, maka ụfọdụ ihe, ọ dị mfe ịtụgharị na ndị ọzọ n'otu axis. Nke a dabere na nhazi na nhazi nke ihe ahụ n'onwe ya.
Maka sistemụ urughuru, enwere ike igosipụta oge nke inertia site na leta m ma gbakọọ ya site na usoro ndị a:
A = .∑i2 .Mi
N'ebe a, anyị nwere na aha ọjọọ nke m bụ obere akụkụ nke oke na r bụ ebe dị anya nke ahụ nwere maka ntụgharị nke ntụgharị. Ahụ ga-agbatị ma mejupụta ọtụtụ ahụ, ya mere oge zuru oke nke enweghị ike bụ nchịkọta nke ngwaahịa niile n'etiti oke na anya. Ọ dabere na geometry ha nwere ihe, nchikota na-agbanwe ma si na ihe dị mkpa gaa na iche. Echiche nke oge nke inertia nwere njikọ chiri anya na akụkụ angular nke ihe ma ọ bụ gbasaa n'ụzọ zuru ezu.
Angular oge nke urughuru usoro
Anyị ga-atụle usoro nke ihe mejupụtara nke ọtụtụ mmadụ na nke na-agbagharị na-eso otu mgbagharị n'otu oge na ụgbọ elu xy, nke ọ bụla nwere ọsọ ọsọ nke metụtara ọsọ angular. N'ụzọ dị otu a, enwere ike ịgbakọ ngụkọta nke usoro a ma nye ya site na nchịkọta ndị a:
L = ω∑i2 .Mi
Ahụ agbatị enwere ike kewaa ya na mpekere obula nwere udiri angular. Ọ bụrụ na axis nke symmetry nke ihe a na-ekwu okwu kwekọrọ na axis z enweghi nsogbu. Ma nke a bụ n'ihi na enwere isi ihe ndị na-anọghị n'ụgbọelu xy, yabụ akụrụngwa ndị mepụtara ya na ndị dị n'akụkụ a na-akagbu.
Ka anyị hụ ugbu a mgbe ọ dị iche. Dị ka ọ dị, mgbe ụgbụ na-eme ihe megide anụ ahụ ma ọ bụ otu, ike nke otu a nwere ike ịgbanwe. Dịka nsonaazụ, otu a ka ọ ga-adị ọkụ ọkụ.
N'aka nke ọzọ, nchekwaba na-apụta mgbe ọ dịgasị mita igwe na-adị ugbu a. Ọ bụrụ na ọnụọgụ ahụ bụ efu, a na-echekwa ume ọkụ. Nsonaazụ a ka dị irè ọbụlagodi na ahụ adịghị agbanwe agbanwe.
Ihe Nlereanya nke angular ọkụ
Ihe ndị a nile abụgoro ọtụtụ echiche na enweghị ike ịghọta ya nke ọma na-enweghị ihe atụ bara uru. Anyị ga-ahụ ihe atụ bara uru nke ike angular. Na nke mbụ anyị nwere skating na egwuregwu ndị ọzọ ebe enwere ntụgharị. Mgbe skater malitere ịtụgharị, ọ na-esetị aka ya wee weta anyị n'akụkụ iji gafee ụkwụ ya. Emere nke a ka iwere ọsọ ntụgharị. Mgbe ọ bụla ozu oscillates mgbe niile, ọ nkwekọrịta. Ekele maka nkwekọrịta a ọ nwere ike ime ka ọ gbanwee ọsọ ya. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na eziokwu nke inwe ike ịme nkwekọrịta na ogwe aka na-ebelata oge nke inertia. Ebe ọ bụ na echekwara ọkụ ọkụ, angular na-agba ọsọ na-abawanye.
Ihe atụ ọzọ bụ ihe mere nwamba jiri daa n'ụkwụ ha. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ego mbido, ọ na-ahụ na ọ dị ngwa ikwu ụkwụ na ọdụ ahụ ka ọ nwee ike ịgbanwe ntụgharị ya nke ntụgharị yana nwee ike ịdapụ n'ụkwụ. Ka ha na-agagharị na ntụgharị ahụ, ọkụ ọkụ ha na-agba bụ efu ebe ọ bụ na ntụgharị ha anaghị aga n'ihu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ike mmụọ